Boqortooyada Ingiriiska: Ninka furay Channel Tunnel waa pro-Brexit - TELES RELAY
ACCUEIL » kale • aan caadi ahayn • International Boqortooyada Ingiriiska: Ninka furay Channel Tunnel waa pro-Brexit
Graham Fagg waa kii ka xaday qaybihii ugu dambeeyay ee dhagaxa ah si uu ugu xiro Boqortooyada Ingiriiska ee Yurub inteeda kale. Isagu maanta waa qayb ka mid ah Brexit
1er Diisembar 1990, Graham Fagg iyo Philippe Cozette ayaa badalay gacan ka gadaal markii ugu danbeysay oo la soo dhaafay dhagxaankii ugu danbeeyay ee Eurotunnel.
Ka shaqee inaad isku xirto UK inta kale ee qaarada yurub ma ahan kuwo la mid ah aBrexit. Waxaa la rumeysan yahay in Graham Fagg, British ah 70 sano ka shaqeeyey on goobta of Tunnel Channel iyo wareemay xubnihii ugu dambeeyay ee dhagaxa in ay ku xidhmaan dalka intiisa kale oo ka mid ahEurope. Qaar ka mid ah 25 sano ka dib markii la furay tunnel, wuxuu maanta yahay taageere of Brexit. "Waxaan ka shaqeeyay Channel Tunnel waxaanay sameeyeen guul, laakiin xaqiiqdii waxaan u codeeyay Brexit "Ayuu yidhiAgence France-Presse septuagenarian this.
hawlgab ayaa galay 1er taariikhda December 1990 la dhiggiisa Faransiiska Philippe Cozette, wajiga labaad ee kulanka ka dhigay qaar ka mid ah mitir 100 ka hooseysa heerka badda. In ka yar afar sano ka dib, on May 6 1994 , boqoradda Elizabeth II iyo madaxweynaha Faransiiska François Mitterrand ayaa furay tunnel. Tan iyo markaas, waddada tareenka ee isku xirta koonfur-bari ee Boqortooyada Midowday ee waqooyiga Faransiiska waxaa lagu amaahiyay ku dhowaad 430 million oo rakaab ah iyo baabuurta 86 million. Qaar ka mid ah dadka Britishka ah, waxay u noqdeen calaamad u ah xidhiidhkooda gaarka ah ee wadankooda ee Yurub.
Laakiin haddii Graham Fagg taageeray goysiga si Community Yurub Dhaqaalaha - taas oo ka hormarey Midowga Yurub - marka 1975 afti, isaguna uusan fileyn in ay tan oo keeni karta in urur siyaasadeed. "Waxaan u codeynay heshiis ganacsi," ayuu yidhi. "Qofna weligiis iima sheegin," waxaanu dooneynaa in aan ka dhigno mid federaal ah. Waxaan hagaajin doonaa dhammaan xeerarka iyo aad leedahay si ay u maamuusi doonaan. ' "Graham Fagg, saddex jeer aabbihiis iyo afar jeer awoowe ku nool magaalada Kismaayo ee Dover ah, ee koonfur bari ee United Kingdom, halkaas oo 62% cod u codeeyay Brexit marka afti 2016 June. Inkastoo uu Euroscepticism, inuu doonayo inuu sii wado xiriirka dhow la leh Yurub.
Waxa uu xiriir la sameeyey Philippe Cozette, oo uu arkay dhowr jeer. Dabadeed waxay rabtaa inay kalsooni ku qabato ka dambeynta "Xidhiidhka ka dhexeeya xeebaha Faransiiska iyo xeebaha Ingiriisku marwalba way jireen, uma maleynayo inay cararaan Ingiriis iyo Faransiiska," ayuu u sheegay Agence France-Presse, oo ka soo duushay dusha sare ee Cape Blanc -Nez, oo la kulmaya England. Gaariga tunnel, Graham Fagg wuxuu sheegay inuu ka baqay inuu ku dhaawaco Philippe Cozette by qodaya dhagaxa.
Markii daloolku uu ku filneyn, labaduba waxay tuurayeen jackhammers oo gacmaha is qabsadeen farxad iyo farxad. "Graham Fagg ee French ayaa sheegay," Hello, saaxiibkay. " Waxaan idinku leeyahay isaga ugu Ingiriisi: "Welcome to France" tan iyo markii aan ku jiray dhinaca Faransiis, "Ugu Yeeray Faransiis si 66 sano, xiganaya uu" kibirka "iyo" farxad "isku qasan" in yar oo ka mid ah murugo maxaa yeelay, shuqulka in aan samaynay dhowr sano oo la joojiyay.
Niger: 50 More ayaa ku dhintay qarax ka dhacay gaari xamuul ah oo ku yaala magaalada Niamey